warkii.com » Xiddiga Ugu Horreeya Ee Ka Tegaya Real Madrid, Kooxda Uu Kusii Jeedo & Qaabka Heshiiska Uu Ku Baxayo
Xiddiga Ugu Horreeya Ee Ka Tegaya Real Madrid, Kooxda Uu Kusii Jeedo & Qaabka Heshiiska Uu Ku Baxayo
Real Madrid waxay wada hadallo kula jirtaa kooxda reer Germany ee Bayer Leverkusen, waxaanay ka wada xaajoonayaan heshiis amaah ah oo muddo sannad ah uu Bundesliga ku tegayo da’yarka reer Brazil ee Reinier.
Valladolid oo uu mulkiile ka yahay weeraryahankii hore ee Los Blancos ee Ronaldo Nazario ayaa sidoo kale xiisaynaysa 18 jirkan oo Zinedine Zidane uu doonayo inuu dibedda ugu baxo amaah si uu khibrad usoo helo.
Laacibkan khadka dhexe oo bishii January ee sannadkan ay Real Madrid kala kusoo iibsatay lacag dhan €30 milyan oo Euro, isla markaana saxeexayy heshiis soconaya illaa sannadka 2026, waxay Real Madrid la doonaysaa inuu tago Leverkusen marka loo eego Valladolid oo heerkeeda ciyaareed hooseeyo.
Qorshaha uu Zinedine Zidane u dejiyey laacibkan ayaa ah in muddo sannad ah uu bannaanka uga baxo Real Madrid oo uu soo helo boos joogto ah iyo khibrad kaddibna uu kusoo laabto Santiago Bernabeu isaga oo ku tartami karaya boos uu ka helo kooxda koowaad.
Real Madrid oo caqabad sharci ay ka haysato inay kubbad-sameeyahan weerarka caawiya kooxdeeda koowaad ku darto maadaama aanu haysan baasaboor Yurub ah, ayna ka buuxaan saddexdii ciyaartoy ee ajaanibka ahaa ee loo ogolaa inay diiwaangashadaan, waxay rajaynaysaa in sannadka dambe uu Vinicius heli doono dhalashada Spain oo Reinier uu markaas boos u bannaanaan doono.
Reinier oo Zinedine Zidane uu ku tilmaamay ciyaartoyga mustaqbalka ee Real Madrid, waxay Los Blancos marinaysaa waddadii Dani Carvajal oo waqti amaah ah kusoo qaaday BayArena ka hor intii aanu kusoo laabanin Santiago Bernabeu.
Tan iyo markii uu yimid Real Madrid bishii January, waxa uu Reinier ka tirsanaa kooxda da’yarta ee Real Madrid Castilla oo uu tababare u yahay Raul, waxaanu u dhaliyey laba gool.